Gini mere ị gaghị wụnye BlueStacks emulator
Programmụ emulator BlueStacks bụ ngwá ọrụ dị ike iji rụọ ọrụ na ngwa gam akporo. O nwere ọtụtụ ọrụ bara uru, ma ọ bụghị usoro ọ bụla nwere ike ịnagide software a. BlueStacks bụ oke akụ na ụba. Ọtụtụ ndị ọrụ na-akọwa na nsogbu na-amalite ọbụna n'oge usoro nhazi. Ka anyị hụ ihe kpatara BlueStacks na BlueStacks 2 na kọmputa.
Gbanye mmekọrịta na ngwa ngwa na emulator BlueStacks
Akaụntụ Google na-enye ndị ọrụ nke otutu ngwaọrụ ohere ịkekọrịta data ka ihe ndekọ akaụntụ onwe onye ọbụla ga-abụrịrị mgbe enwere ikike. Nke mbụ, ọ na-adọrọ mmasị mgbe ị na-eji ngwa: ọganihu egwuregwu, ihe edeturu na data onwe onye nke ngwa arụmọrụ ga-apụta ebe ị na-abanye na akaụntụ Google gị ma wụnye ha.
Ot'u esi agbanwe ntughari keyboard na emetuta BlueStacks
Mgbe ị wụnye BlueStacks, ọ bụ ngwa ahụ ejiri iji keyboard nke kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ? site na ndabara. Otú ọ dị, ụdị ntinye data adịghị arụ ọrụ mgbe niile. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-aga na Bekee, ịbanye paswọọdụ, nhazi ahụ adịghị agbanwe mgbe niile ma n'ihi nke a, ntinye data nkeonwe agaghị ekwe omume.
Tinye cache na usoro ihe omume BlueStacks
Oghere egwuregwu ahụ bụ ebe nchekwa pụrụ iche nke na-echekwa faịlụ dị iche iche na-ebili n'oge ọrụ na ngwa ahụ. Ọ bụrụ na ị na-eji ngwaọrụ gam akporo (ekwentị, mbadamba), mgbe ahụ ọ dịghị nsogbu, ebe ọ bụ na echekwara cache na-akpaghị aka, site na ọrụ Google. Mgbe ị na-arụ ọrụ na emulator BlueStacks, ọnọdụ dịtụ iche na ndị ọrụ ga-edozi cache n'onwe ha.
Njehie ikike na usoro BlueStacks
Site n'itinye emulator BlueStacks, onye ọrụ ahụ abanye na windo ahụ, ebe ọ nwere ike ịchọta ma budata ngwa kachasị amasị site na Play Market. Ịbanye aha na igbe nchọta ọchụchọ ebe ị chọrọ ịbanye aha njirimara na paswọọdụ. Nke a bụ data anyị banyere na ntọala otu oge. O yiri ka abanye na nbanye na paswọọdụ n'ụzọ ziri ezi, ihe omume ahụ na-ekwusi ike na njehie ikike.
Ihe kpatara enweghị njikọ Ịntanetị na BlueStacks
Emulator BlueStacks bụ ngwá ọrụ maka iji ngwa gam akporo. Ihe omume a nwere interface enyi na enyi, na ọbụna ndị na-enweghị ahụmahụ nwere ike ịghọta ọrụ ya n'ụzọ dị mfe. N'agbanyeghị uru ya, usoro ihe omume ahụ nwere nnukwu usoro chọrọ ma ọ na-ezute nsogbu dịgasị iche. Otu n'ime nsogbu ndị kachasị mma bụ njehie ịntanetị.
Mgbọrọgwụ bụ setịpụrụ ikike pụrụ iche nke na - enye gị ohere ịrụ ọrụ ọ bụla na usoro gam akporo. Site na ndabara, ikike ndị dị otú ahụ nwere ike ịgụnye. Ọ bụrụ na mgbọrọgwụ adịghị, mgbe ahụ, ị ​​ga-arụ ọrụ ntakịrị na usoro a. Na BlueStacks, dịka ọ bụla ngwaọrụ Android, ọ ga-ekwe omume ịnweta ikike zuru ezu.
Họrọ ụdị ana-acha BlueStacks
N'otu aka, BlueStacks bụ usoro emulator kachasị mma nke akwadoro ọrụ niile dị mkpa iji rụọ ọrụ na ngwa gam akporo. N'aka nke ọzọ, nke a bụ ngwanrọ dị arọ nke na-eri ọtụtụ ihe ntanetị arụmọrụ. Na usoro nke na-arụ ọrụ na Blustax, ndị ọrụ na-ahụ ọkwa dịgasị iche iche, kwenye.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na BlueStacks kwụsịrị
BlueStacks emulates ọrụ nke sistemụ arụmọrụ gam akporo, na-enye onye ọrụ ọrụ niile dị mkpa na arụmọrụ ka mma. N'ezie, usoro ihe omume nke na-eme ka ọrụ nke smartphone dị ike kwesịkwara iwepụta ọtụtụ ihe na kọmputa, ma ọ bụghị nke ọ bụla dị iche iche site na ịrụ ọrụ nke ngwaọrụ na-adịghị ike na mmefu ego.
Njehie 25000 na BlueStacks
BlueStacks emulator bụ usoro ihe mgbagwoju anya na ihe dị mwute ikwu na ịkụ aka dị iche na ya abụghị ihe omimi. Ọ bụrụ na n'oge nrụnye nke emulator ị nwere windo na ọdịnaya ndị a: "Error 25000", na nwụnye kwụsịrị, mgbe ahụ bụ nke a na usoro gị. Ka anyi lee ihe kwesiri ime iji dozie nsogbu ahu.
Anyị na-edebanye aha na BlueStacks ngwa
Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ na-ajụ ajụjụ ahụ: "Olee otú ịmepụta akaụntụ na BlueStax na uru ndị ndebanye aha a na-enye?" Na mbido, ndebanye aha dị otú a mgbe mbụ ị malitere BlueStacks. Mgbe ị na-edepụta akaụntụ Google, akwụkwọ Badtacks na-egosi na-akpaghị aka na otu aha. Ịdenye profaịlụ ọhụrụ Google adịghị mkpa, ịnwere ike ịgbakwunye otu dị.
Wepụ BlueStacks emulator na kọmputa ahụ kpamkpam
Na-etinye ma na-ewepụ ihe omume mgbe niile, ọtụtụ ndị ọrụ adịghị eche na onye ọ bụla n'ime ha na-ahapụ faịlụ na-enweghị isi, ndenye ndekọ, ntọala. Ụdị ọrụ Windows arụmọrụ na-anaghị ekwe ka ihicha ihe dị otú ahụ mgbe mwepụ nke usoro ihe omume ahụ n'onwe ya. Ya mere, ọ dị mkpa iji ngwaọrụ ndị ọzọ.
Nhazi System maka Wụnye BlueStacks
Imirikiti ndị ọrụ Android nwere ngwaọrụ dabere na gam akporo, na ọtụtụ ngwaọrụ mobile na-aghọ ihe dị oké mkpa maka anyị. Anyị na-eji ngwa bara uru, na-egwu egwuregwu dị iche iche, si otú ahụ na-agbanwe smartphone ma ọ bụ mbadamba n'ime onye inyeaka kwa ụbọchị. Ọ bụghị ha nile nwere mbipute PC, n'ihi ya, ha ga-agbanye gaa ngwaọrụ gam akporo.
Etu esi eji emulator BlueStacks
Ugbu a n'Ịntanet ị nwere ike ibudata ọtụtụ emulator software iji rụọ ọrụ na sistemụ arụmọrụ gam akporo. Ma ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ BluStaks. Ọ nwere ụdị interface dị mfe dịka o kwere omume na ngwaọrụ gam akporo, na ọbụna ndị na-enweghị ihe ọmụma pụrụ iche nwere ike ịghọta ya.
Ebee ka faịlụ ndị echekwara na usoro ihe omume BlueStacks
Mgbe ị na-arụ ọrụ na BlueStacks, enwere mgbe ọ dị mkpa ibudata faịlụ dị iche iche. Ọ nwere ike ịbụ egwu, ihe oyiyi na ndị ọzọ. Na-ebugote ihe dị mfe, ọ na-eme dịka ngwaọrụ ngwaọrụ ọ bụla. Ma mgbe ị na-agbalị ịchọta faịlụ ndị a, ndị ọrụ na-eche nsogbu ụfọdụ ihu.
Ihe kpatara BlueStacks enweghị ike ịkpọtụrụ ndị sava Google
BlueStacks bụ ngwanrọ dị ike iji rụọ ọrụ na ngwa gam akporo. N'agbanyeghị na ọ maara, ọ bụ otu n'ime ndị isi na nsogbu dị iche iche. Otu n'ime ndị a bụ njehie ahụ: "Enweghị ike ịkpọtụrụ ndị sava Google." Tụlee otu ị ga - esi dozie nsogbu a. Download BlueStacks Olee otú iji dozie njehie BlueStacks "enweghị ike ịkpọtụrụ ndị sava Google"
Ntọala enweghị ngwụcha na BlueStacks
BlueStacks nwere mmekorita kachasị mma na sistemụ arụmọrụ Windows, tụnyere ndị ọgbọ. Ma na usoro ịwụnye, na-agba ọsọ ma na-arụ ọrụ na usoro ihe omume ahụ site n'oge ruo n'oge nsogbu na-ebili. Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ na-achọpụta na ngwa ahụ anaghị ebupụta na nhazi njedebe na-enweghị ngwụcha. E nweghị ọtụtụ ihe kpatara nke a.
Kedu ihe mere textures ojii ji eme mgbe BlueStacks na-arụ ọrụ?
Emulator BluStaks n'agbanyeghị ọrụ ya nile bara uru bụ otu n'ime ndị isi na ọnọdụ nke nsogbu dị iche iche. N'ụzọ bụ isi, nsogbu na-abịa n'ihi nnukwu usoro chọrọ, nke ndị ọrụ na-eleghara anya. Usoro ihe omume ahụ n'onwe ya nwekwara ụfọdụ ezughị okè. Ọ bụrụ na ị wụnye BlueStacks ọrụ ọma ma nagide ihe niile ahụ, ma na mberede, ejiji mara mma gbanwere na ngebichi ojii, ị nwere ike ịnwa ịme ụfọdụ iji dozie nsogbu ahụ.
Esi tinye usoro ihe omume BlueStacks
BlueStacks bụ igwe kwadoro usoro ihe omuma nke igwe na igwe. Maka onye ọrụ ahụ, a na-emezi usoro nhazi niile, mana ụfọdụ nzọụkwụ nwere ike ịchọrọ ịhazigharị ya. Ịwụnye BlueStacks na PC Iji nwee ike ịgba ọsọ egwuregwu na ngwa e mere maka gam akporo na kọmputa, ị ga-achọ ịwụnye emulator.
Dozie njehie mmalite nke BlueStacks
Mgbe ị na-arụ ọrụ na BluStaks, ndị ọrụ nwere oge nsogbu. Usoro ihe omume ahụ nwere ike ịjụ ịrụ ọrụ, kwụ. Amalite nbudata oge na-adịghị mma. Enwere ọtụtụ ihe kpatara nke a. Ka anyi gbalịa idozi nsogbu ndi ahu. Download BlueStacks Na-edozi nsogbu nsogbu mmalite BlueStacks Nlele nhazi kọmputa. Ya mere, gịnị mere BlueStacks anaghị arụ ọrụ?